विराटलाई छाडेर अनुष्काले यी हिरोसँग भ्यालेनटाइन मनाउने
माघ २४, काठमाण्डाैँ ।
अनुष्का शर्माले केही समय फिल्मबाट विश्राम लिइन्, बिवाहका लागि । टिम इन्डियाका कप्तान विराट कोहलीलाई औपचारिक श्रीमान् बनाएका अनुष्कको हनिमुन अवधी पनि सकिएको छ । अब उनी पुन फिल्मी लयमा फर्कने सुरसारमा छन् ।
त्यही फिल्मको कारणले उनी नव दुलहासँग पहिलो भ्यालेनटाइन मनाउनबाट बञ्चित हुँदैछिन् । किनभने उनको नयाँ फिल्म भ्यालेनटाइन डेमा छायांकन हुँदैछ । फिल्मको नाम हो, सुई धागा । यो मेड इन इन्डियामा आधारित रहेको बताइन्छ ।
फिल्म छायांकनका क्रममा उनी वरुण धवनसँग हुनेछिन् । अर्थात उनको भ्यालेनटाइन वरुणसँग वित्नेछ । फिल्ममा वरुण र अनुष्काले स्क्रिन साझेदार गरेका छन् । यस फिल्ममा उनीहरुको रोमान्स देख्न पाइनेछ ।
फिल्म खासमा स्वदेशी उद्यमलाई बढाव दिने खालको छ । यद्यपी यसको कथा निकै रोचक रहेको र त्यसमा प्रेमकथा पनि रहेको वताइन्छ । फिल्ममा वरुण धवनले एक दर्जीको भूमिका खेल्दैछन् । तर, अनुष्काको भूमिकाबारे भने अझै खुलाइएको छैन । राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता टीम निर्देशक शरत कटारिया र निर्माता मनीष शार्माको फिल्म सुई धागा–मेड इन इन्डिया आगमी २८ अक्टुबरमा रिलिज हुनेछ ।
प्रकाशित मिति : २०७४ माघ २४ गते बुधवार
महानायक राजेश हमालको सम्पत्ति कति छ ?
विवाहबारे के भन्छिन् रेखा थापा ?
भद्रगोलको २०२ एपिसोडले गर्यो नयाँ रेकर्ड कायम, बले र प्रिज्माको के भएको थियोे त्यसमा ?
गायक मोहन राई सांस्कृतिक संघको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित
गायक धुर्ब र अनु रेलै चढी जादै (भिडियो सहित)